Bonded Warehouse ဆိုသညျနှငျ့ ယငျး၏အကြိုးကြေးဇူးမြား - Logistics Guide
Bonded Warehouse ထဲမှာဘယျလိုမြိုးပစ်စညျးတှကေိုထညျ့ထားလို့ရမှာလဲ ?
နိုငျငံရဲ့စညျးမဉျြးစညျးကမျးကိုလိုကျပွီး bonded warehouse ထဲမှာထားလို့ရမယျ့ ပစ်စညျးအမြိုးအစားတှကှောခွားသှားမှာဖွဈ ပါတယျ။ အောကျမှာတော့ နိုငျငံတကာမှာရှိတဲ့ bonded warehouse အမြိုးအစားအခြို့ကိုဖျောပွပေးထားပါတယျ။
၁။ Temporary storage premises (RTO)
အကောကျခှနျရဲ့ထောကျခံခကျြကိုရဖို့အတှကျ ယာယီသဘောမြိုးထားတဲ့ကုနျပစ်စညျးတှကေို ထညျ့သှငျးသိုလှောငျထားလို့ ရမှာဖွဈပါတယျ။
၂။ Type B Customs warehouse
အမြားပိုငျ customs warehouse ပါ။ ဒါကိုအခြို့က အစိုးရပိုငျလို့လညျးဆိုကွပါတယျ။ မညျသူမဆိုသူတို့ရဲ့ကုနျပစ်စညျးတှကေို အကောကျခှနျရဲ့ထိနျးခြုပျမှုအောကျမှာ လာရောကျထညျ့သှငျးထားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ တငျသှငျးသူအနနေဲ့ custom duty မဖွတျရသေးခငျအထိသိမျးစညျးထားနိုငျပွီး ဘုံသဘောမြိုးနဲ့အသုံးပွုကွတာကိုလညျးတှရေ့ပါတယျ။
၃။ Type C customs warehouse
တဈသီးပုဂ်ဂလအမြိုးစားပါ။ ကိုယျပိုငျတဲ့ကိုယျ့ပစ်စညျးကို စိတျကွိုကျထားနိုငျပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျပဲ ကိုယျတာဝနျယူထားနိုငျတဲ့ အခွားသူတှရေဲ့ပစ်စညျးတှကေိုလညျး ထားသိုနိုငျပါတယျ။ အကောကျခှနျနဲ့ပကျသတျလို့ကတော့ customs warehouse ပိုငျ ရှငျကပဲတာဝနျယူရမှာဖွဈပါတယျ။ တငျသှငျးခှငျ့ရထားတဲ့သူတှအေနနေဲ့ တငျသှငျးခှငျ့ရထားတဲ့ပစ်စညျးတှကေိုပဲ တငျသှငျးသို လှောငျကွလို့ Private Bonded Warehouse လို့လညျးချေါကွပါတယျ။
၄။ Type D and E customs warehouse
၅။ Free Warehouse
အမြားပိုငျအမြိုးအစားတဈခုဖွဈပွီး အကောကျခှနျရဲ့ထိနျးခြုပျအောကျမှာရှိနမေယျ့ အဆောကျအဦးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဘယျသူမဆိုကိုယျ့ရဲ့ ကုနျပစ်စညျး တှကေိုလာထားနိုငျပါတယျ။
၆။ Special economic zone or Free zone
အပျေါက Free Warehouse နဲ့မတူတာကတော့ ယငျးကအဆောကျအဦးတဈခုမြှသာမဟုတျပဲ သတျသတျမှတျမှတျလုပျ ထားတဲ့နရောတဈခုဖွဈနခွေငျးပါ။
မွနျမာပွညျရဲ့ပထမဆုံးသော bonded warehouse လုပျဆောငျခှငျ့ရသညျ့ကုမ်ပဏီကတော့ Daizen Myanmar ကုမ်ပဏီ ပဲဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၇ခုနှဈမှာ စတငျလုပျဆောငျခှငျ့ရရှိခဲ့တာဖွဈပွီး ကုနျပစ်စညျးတှကေိုအကောကျခှနျနဲ့ ကုနျပစ်စညျးခှနျ မဆောငျပဲ သိမျးဆညျးထားခှငျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ ရောငျးလိုကျတာပဲဖွဈဖွဈ၊ နိုငျငံရပျခွားကိုသဘောင်္နဲ့ပဲဖွဈဖွဈတငျပို့ လိုကျပွီဆိုရငျတော့ သတျမှတျထားတဲ့အခှနျကိုဆောငျရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Bonded warehouse အမြိုးအစား တှကေ Special economic zone or Free zone အနနေဲ့လုပျကိုငျဆောငျရှကျနတေယျဆိုတာကို မွငျသာစမှောဖွဈပွီး သူတို့အနနေဲ့ သီလဝါစကျမှုဇုနျရဲ့ အပိုငျး (က)မှာလုပျဆောငျနသေလို အခှနျကငျးလှတျခှငျ့ ၅ နှဈရရှိထားတယျလို့ သတငျး တှရေဲ့ဖျောပွမှုအရလညျးသိရပါတယျ။ (source from –Daizen myanmar)
Bonded Warehouse ရဲ့အကြိုးကြေးဇူးတှကေဘာတှလေဲ?
Custom clearance ဖွတျတဲ့အပိုငျးကို ကားတငျသှငျးသူတျောတျောမြားမြားနဲ့ ကုနျပစ်စညျးတငျသှငျးသူတျောတျောမြားမြားနား လညျကွပါတယျ။ အခြိနျပေးရမယျ ပိတျဆို့မှုတှဖွေဈမယျပေါ့။ ဒါပမေယျ့ bonded warehouse ဖွဈလာတဲ့အခါမှာတော့ အခြိနျကုနျသကျသာပွီး အဆငျပွခြေောမှစေ့မှောဖွဈပါတယျ။ မရောငျးရခငျအထိ အကောကျခှနျမဆောငျရသေးတဲ့အတှကျ အဆငျပွလှေယျကူမှုသာမက ငှကွေေးစီးဆငျးမှုအတှကျလညျး အဆငျပွစေပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတှေ၊ တရုတျနဲ့ တောငျအာဖရိကနိုငျငံတှကွေား ကုနျစညျတှရေောငျးခမြှုအတှကျ supplier တှရေဲ့ အားထားရတဲ့ဗဟိုအခကျြ အခြာတဈခုလညျး ဖွဈလာစနေိုငျပါတယျ။
MACCS အသုံးပွုဖို့အတှကျ Bonded Warehouse Code ဘယျလိုလြှောကျမလဲ
Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) အသုံးပွုရနျအတှကျ Bonded Warehouse Code လြှောကျထားရာတှငျလိုအပျသော စာရှကျစာတမျးတှကေို ၂၀၁၈ခုနှဈဖဖေျေါဝါရီလက ဖျောပွထားခဲ့မှုအရ
C.M.P Company အတှကျ
၁။ ညှနျကွားရေးမှူး (MACCS) ထံလိပျမူ၍ company letterhead ဖွငျ့ company မှတာဝနျရှိသူလကျမှတျရေးထိုးထားသော လြှောကျလှာ၊ လြှောကျလှာပျေါတှငျ ထုတျကုနျသှငျးကုနျကွီးကွပျရေးဌာနခှဲ C.M.P Section မှ C.M.P Company ဖွဈကွောငျးထောကျခံခကျြလကျမှတျပါရှိရမညျ။
၂။ Importer/Exporter Code မိတ်တူ
၄။ ကုမ်ပဏီ၏ FORM VI မိတ်တူ
၅။ ကုမ်ပဏီ၏ FORM XXVI မိတ်တူပါရှိရမညျ။
SEZ TLA Company အတှကျ
၁။ ညှနျကွားရေးမှူး (MACCS) ထံလိပျမူ၍ company letterhead ဖွငျ့ company မှတာဝနျရှိသူလကျမှတျရေးထိုးထားသော လြှောကျလှာ၊
၃။ ကုမ်ပဏီ၏ FORM I မိတ်တူ
၄။ ကုမ်ပဏီ၏ FORM CR-6 &7မိတ်တူ
၅။ Letter of Approval for Investor (Form-2) မိတ်တူပါရှိရမညျ။ (Source from Maccs/Mcis-cargo) လိုအပျမှာဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့အကောကျခှနျဌာနရဲ့စညျးမဉျြးတှအေရ bonded warehouse တှကေို CCTV ကငျမရာတှနေဲ့ ၂၄နာရီ ပတျလုံး စောငျ့ကွညျ့နဖေို့လိုပျအပျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ MACCS အသုံးပွုခွငျးအားဖွငျ့ အကောကျခှနျအနနေဲ့ bonded warehouse တှရေဲ့ကုနျပစ်စညျးအဝငျအထှကျမှနျသမြှ ကိုစောငျ့ကွညျ့နနေိုငျမှာလညျးဖွဈပါတယျ။
ပွညျထောငျစုလှတျတျော၏ Bonded Warehouse အတှကျထုတျပွနျခကျြ
Bonded Warehouse နဲ့ပကျသတျလို့ ၂၀၁၈ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ ၆ ရကျနမှေ့ာ ပွညျထောငျစုလှတျတျောအနနေဲ့ ပငျလယျရေ ကွောငျး၊အကောကျခှနျအကျဥပဒဟေုအစားထိုးပွငျဆငျခဲ့ပွီး Public Warehouse ဟုချေါဆိုခွငျးအစား Public Custom Warehouse ဟုပွငျဆငျချေါဆိုစခေဲ့သလို Private Warehouse နရောတှငျလညျး Private Custom Warehouse ဟု ပွောငျးလဲချေါဆိုစခေဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Manufacturing Customs Warehouse ကဏ်ဍသဈကိုလညျး ထပျတိုးပေးခဲ့ပါတယျ။ Manufacturing Customs Warehouse အတှကျလိုငျစငျကိုတော့ အကောကျခှနျရဲ့ Director-General ကနေ ခှငျ့ပွုပေး သှားမှာဖွဈပါတယျ။
Bonded Warehouse အမြိုးအစားခှငျ့ပွုခကျြ
Bonded Warehouse ကို SEZ TLA တှအေတှကျ ၂၀၁၇ခုနှဈကတညျးက စတငျခှငျ့ပွုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၈နှဈကုနျ ပိုငျးမှာတော့ SEZ TLA အပွငျအခွားသော နရောတှအေတှကျ ခှငျ့ပွုပေးဖို့အကောကျခှနျအနနေဲ့ စီမံဆောငျရှကျနတေယျ ဆိုပွီးသတငျးတှထှေကျလာခဲ့ပါတယျ။ Myanmar Investment Commission ရဲ့ Invest Plan ထုတျပွီးကတညျးက အပွငျ မှာစတငျလုပျဆောငျမှုတှရှေိနခေဲ့တာဖွဈတဲ့အပွငျ TLA အပွငျဘကျအတှကျ Bonded Warehouse လုပျဆောငျမှု ခှငျ့ပွုခကျြကို သကျဆိုငျရာအနနေဲ့ သွဂုတျလတတိယပတျလောကျက စမျးသပျခှငျ့ပွုပေးခဲ့ဖှယျရှိတယျလို့ Logistics နဲ့နီးစပျတဲ့အသိုငျးအဝိုငျးကလာတဲ့သတငျးတှအေရ သိရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့ကတော့ လုပျပိုငျခှငျ့ပေးထားပမေယျ့ အပွီးသတျလုပျဆောငျခကျြနဲ့ပကျသတျပွီးဆကျလကျဆှေးနှေးဆဲမို့ အခြိနျအနညျးငယျယူရဦးမယျလို့ ထငျကွေးပေးနကွေ သလိုလကျရှိမှာလညျး dry port နဲ့ပကျသတျလို့ စမျးသပျလုပျဆောငျနတေဲ့ ကုမ်ပဏီအခြို့ရှိတယျလို့လညျးဆိုကွပါတယျ။
Bonded warehouse ဆိုတာက နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်တော့ အကောက်ခွန်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု ကိုသွင်းလာမယ် warehouse ထဲကိုထည့်မယ်၊ ထူးခြားတာကအခွန်ပေးစရာမလိုသေးဘူး။ ရောင်းတော့မှသာ အခုဘယ် လောက်ရောင်းလိုက်ရပြီဆိုပြီး အခွန်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ချက်ခြင်းအခွန်တန်းဆောင်စရာမလိုပဲ ပစ္စည်းအ တွက်ရင်းရမယ့်ကုန်ကျစရိတ်ကို ထိန်းထားလို့ရတယ်။ ရောင်းပြီးတော့မှ အခွန်ပြန်ဆောင်ဆိုပြီး ဆိပ်ကမ်းထဲမှာပစ္စည်း ထားတဲ့သဘောနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။
Bonded Warehouse ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုထည့်ထားလို့ရမှာလဲ ?
နိုင်ငံရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုလိုက်ပြီး bonded warehouse ထဲမှာထားလို့ရမယ့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေကွာခြားသွားမှာဖြစ် ပါတယ်။ အောက်မှာတော့ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ bonded warehouse အမျိုးအစားအချို့ကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
အကောက်ခွန်ရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုရဖို့အတွက် ယာယီသဘောမျိုးထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ထည့်သွင်းသိုလှောင်ထားလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အများပိုင် customs warehouse ပါ။ ဒါကိုအချို့က အစိုးရပိုင်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ မည်သူမဆိုသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အကောက်ခွန်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ လာရောက်ထည့်သွင်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တင်သွင်းသူအနေနဲ့ custom duty မဖြတ်ရသေးခင်အထိသိမ်းစည်းထားနိုင်ပြီး ဘုံသဘောမျိုးနဲ့အသုံးပြုကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
တစ်သီးပုဂ္ဂလအမျိုးစားပါ။ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းကို စိတ်ကြိုက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ပဲ ကိုယ်တာဝန်ယူထားနိုင်တဲ့ အခြားသူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ထားသိုနိုင်ပါတယ်။ အကောက်ခွန်နဲ့ပက်သတ်လို့ကတော့ customs warehouse ပိုင် ရှင်ကပဲတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တင်သွင်းခွင့်ရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ တင်သွင်းခွင့်ရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲ တင်သွင်းသို လှောင်ကြလို့ Private Bonded Warehouse လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။
အများပိုင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး အကောက်ခွန်ရဲ့ထိန်းချုပ်အောက်မှာရှိနေမယ့် အဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမဆိုကိုယ့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း တွေကိုလာထားနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်က Free Warehouse နဲ့မတူတာကတော့ ယင်းကအဆောက်အဦးတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပဲ သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ် ထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေခြင်းပါ။
>>> Storage Services သိုလှောင်ရေးကဏ္ဍနှင့်ပက်သတ်ပြီး ၀န်ဆောင်မှု ၁၄ ခုကိုရှာဖွေရန်နှိပ်ပါ<<<
မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံးသော bonded warehouse လုပ်ဆောင်ခွင့်ရသည့်ကုမ္ပဏီကတော့ Daizen Myanmar ကုမ္ပဏီ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ စတင်လုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအကောက်ခွန်နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းခွန် မဆောင်ပဲ သိမ်းဆည်းထားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားကိုသဘောင်္နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ပို့ လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အခွန်ကိုဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Bonded warehouse အမျိုးအစား တွေက Special economic zone or Free zone အနေနဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကို မြင်သာစေမှာဖြစ်ပြီး သူတို့အနေနဲ့ သီလ၀ါစက်မှုဇုန်ရဲ့ အပိုင်း (က)မှာလုပ်ဆောင်နေသလို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ၅ နှစ်ရရှိထားတယ်လို့ သတင်း တွေရဲ့ဖော်ပြမှုအရလည်းသိရပါတယ်။ (source from –Daizen myanmar)
Bonded Warehouse ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေလဲ?
Custom clearance ဖြတ်တဲ့အပိုင်းကို ကားတင်သွင်းသူတော်တော်များများနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူတော်တော်များများနား လည်ကြပါတယ်။ အချိန်ပေးရမယ် ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် bonded warehouse ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ အချိန်ကုန်သက်သာပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မရောင်းရခင်အထိ အကောက်ခွန်မဆောင်ရသေးတဲ့အတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူမှုသာမက ငွေကြေးစီးဆင်းမှုအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ၊ တရုတ်နဲ့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကြား ကုန်စည်တွေရောင်းချမှုအတွက် supplier တွေရဲ့ အားထားရတဲ့ဗဟိုအချက် အချာတစ်ခုလည်း ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
MACCS အသုံးပြုဖို့အတွက် Bonded Warehouse Code ဘယ်လိုလျှောက်မလဲ
Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) အသုံးပြုရန်အတွက် Bonded Warehouse Code လျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းတွေကို ၂၀၁၈ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါရီလက ဖော်ပြထားခဲ့မှုအရ
C.M.P Company အတွက်
၁။ ညွှန်ကြားရေးမှူး (MACCS) ထံလိပ်မူ၍ company letterhead ဖြင့် company မှတာဝန်ရှိသူလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ၊ လျှောက်လွှာပေါ်တွင် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်ကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲ C.M.P Section မှ C.M.P Company ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်ပါရှိရမည်။
၂။ Importer/Exporter Code မိတ္တူ
၄။ ကုမ္ပဏီ၏ FORM VI မိတ္တူ
၅။ ကုမ္ပဏီ၏ FORM XXVI မိတ္တူပါရှိရမည်။
SEZ TLA Company အတွက်
၁။ ညွှန်ကြားရေးမှူး (MACCS) ထံလိပ်မူ၍ company letterhead ဖြင့် company မှတာဝန်ရှိသူလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ၊
၃။ ကုမ္ပဏီ၏ FORM I မိတ္တူ
၄။ ကုမ္ပဏီ၏ FORM CR-6 &7မိတ္တူ
၅။ Letter of Approval for Investor (Form-2) မိတ္တူပါရှိရမည်။ (Source from Maccs/Mcis-cargo) လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကောက်ခွန်ဌာနရဲ့စည်းမျဉ်းတွေအရ bonded warehouse တွေကို CCTV ကင်မရာတွေနဲ့ ၂၄နာရီ ပတ်လုံး စောင့်ကြည့်နေဖို့လိုပ်အပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် MACCS အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အကောက်ခွန်အနေနဲ့ bonded warehouse တွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအ၀င်အထွက်မှန်သမျှ ကိုစောင့်ကြည့်နေနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ Bonded Warehouse အတွက်ထုတ်ပြန်ချက်
Bonded Warehouse နဲ့ပက်သတ်လို့ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အနေနဲ့ ပင်လယ်ရေ ကြောင်း၊အကောက်ခွန်အက်ဥပဒေဟုအစားထိုးပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး Public Warehouse ဟုခေါ်ဆိုခြင်းအစား Public Custom Warehouse ဟုပြင်ဆင်ခေါ်ဆိုစေခဲ့သလို Private Warehouse နေရာတွင်လည်း Private Custom Warehouse ဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Manufacturing Customs Warehouse ကဏ္ဍသစ်ကိုလည်း ထပ်တိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ Manufacturing Customs Warehouse အတွက်လိုင်စင်ကိုတော့ အကောက်ခွန်ရဲ့ Director-General ကနေ ခွင့်ပြုပေး သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Bonded Warehouse အမျိုးအစားခွင့်ပြုချက်
Bonded Warehouse ကို SEZ TLA တွေအတွက် ၂၀၁၇ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈နှစ်ကုန် ပိုင်းမှာတော့ SEZ TLA အပြင်အခြားသော နေရာတွေအတွက် ခွင့်ပြုပေးဖို့အကောက်ခွန်အနေနဲ့ စီမံဆောင်ရွက်နေတယ် ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Myanmar Investment Commission ရဲ့ Invest Plan ထုတ်ပြီးကတည်းက အပြင် မှာစတင်လုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အပြင် TLA အပြင်ဘက်အတွက် Bonded Warehouse လုပ်ဆောင်မှု ခွင့်ပြုချက်ကို သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ သြဂုတ်လတတိယပတ်လောက်က စမ်းသပ်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ဖွယ်ရှိတယ်လို့ Logistics နဲ့နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကလာတဲ့သတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပေမယ့် အပြီးသတ်လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပက်သတ်ပြီးဆက်လက်ဆွေးနွေးဆဲမို့ အချိန်အနည်းငယ်ယူရဦးမယ်လို့ ထင်ကြေးပေးနေကြ သလိုလက်ရှိမှာလည်း dry port နဲ့ပက်သတ်လို့ စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီအချို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။
Custom bonded warehouse နဲ့ပက်သတ်ပြီး ဘာတွေသိထားပြီးပြီလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော SEZ Bonded Warehouse ကုမ္ပဏီ Daizen Myanmar နှင့် အင်တာဗျူး